"Fapping" ကိုအောင်မြင်စွာရပ်တန့်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏လမ်းညွှန် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
ဖြစ်နိုင်သည့်တစ် ဦး က reddit noFap ပို့စ် ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားတွေအကြံပြုသောအရာကိုထက်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းယူ.
ကျွန်တော့်ဘဝမှရုပ်ပုံများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှတွင်အခက်ခဲဆုံးသောခရီးဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုအဘယ်ကြောင့်အလွန်ခက်ခဲစေသနည်း fapping ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးသည်အလွန်စွဲလမ်းစေသည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် ပို၍ နည်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မသိသောအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်ကျပြီးအရှက်ကွဲခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြaboutနာကိုပြောပြသော်လည်းသူမလုပ်နိုင်သည့်အရာသိပ်မရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသူမကိုကျွန်ုပ်အား“ ကူညီ” ရန်သာမကြာခဏကျွန်ုပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစေလိုသည်မဟုတ်ပါ။ ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါတို့ဟာဒီရုန်းကန်မှုမှာငါတို့တွေအများကြီးပဲ၊ ဤနေရာတွင် reddit အပေါ်ကသူချင်း NoFappers ၏အကူအညီ မှလွဲ၍ ကျန်။ ဤသည်ကအားလုံးကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်မှုသည်အဆင့်များစွာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထမှဝေးရာသို့ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းကွဲပြားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ဤသည်မှာလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုကိုအခြားသူများအားဝေမျှရန်နှင့် fap စစ်ပွဲရှိညီအစ်ကိုချင်းများကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၁ - လမထွက်ခင်လများထွက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာတွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဤနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စွဲလမ်းမှုအများဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး ကိုယူသောအခါ - အခြားအားနည်းနေသည်။ ပထမနှစ်ခုဖယ်ထုတ်ရန်ပိုလွယ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဖြစ်သည်။
ရပ်တန့် porn နေ့ချင်းညချင်းလည်းခက်ခဲထေူရှိလျှင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်နို့ကွာ။ ဒီနေရာတွင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါသည်:
စတိုးဆိုင်ကိုသွားပြီးညစ်ညမ်းမဟုတ်သောမဂ္ဂဇင်း ၄ စောင် (လစဉ်ထုတ်ပမာဏ) ကို ၀ ယ်ပါ။ သူတို့ဟာ Shape နဲ့ Bikini မဂ္ဂဇင်းကနေ Victoria Secret အထိညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံများမလုပ်နိုင်ပါ။ ဤမဂ္ဂဇင်း (၄) ခုသည်သင်၏နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။
FAP နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်များအတွက်မဂ္ဂဇင်းကိုအသုံးပြုပြီး, ဒါပေမယ့်ဒီမှာစိတ်ကူးနောက်ဆုံးမှာသင် FAP နှင့်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုသုံးပြီးရပ်တန့်တိုင်းအတူတူပုံရိပ်တွေကိုကြည့်၏ပျင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပိုပြီးမဂ္ဂဇင်းများကိုဝယ်ယူကိုလည်းတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်!
ခြေလှမ်း 1 ၏တစ်ခုလုံးကိုရည်မှန်းချက်ကသင့်ရဲ့ FAP လောင်စာပြင်ပအာရုံခံသုံးပြီးရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ပါသည်, fapping ရပ်တန့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ FAP မီးနှင့်သင်၏အခန်းတစ်ခန်းကိုချွတ်အတွက်နှင့်သင့်ပါစေ စိတ်ကို အခမဲ့ကျင်လည်ကျက်။ သငျသညျညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အခြားအသံများကို / ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ fapping ကျွမ်းကျင်ကြပြီးတာနဲ့တစ်လအဘို့ဤလုပ်နေတာဆက်လက်; သို့မဟုတ်6သို့သော်ရှည်လျားသင်ထားဖို့လိုခံစားရသည်။
အဆင့် ၂ - သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်များပါ
သငျသညျ fapping နုတ်ထွက်မီ, လုပ်ဖို့တခြားအရာနှင့်သင်၏အချိန်ဇယားကိုဖြည့်ဖို့ကိုစတင်ပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်၏ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌အိမ်မှာတစ်ဦးတည်းထိုင်နေစဉ် porn သို့မဟုတ် fapping ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းမဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သင်ပြုတခြားအမှုအရာကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ် မှစ. porn ဤအချက်မှာလမ်းထဲကဖြစ်ပါတယ်, ဒီတာဝန်အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤတွင်သင်၏အချိန်နှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းများအတွက်အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များနှင့်အတွေးအခေါ်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ထိပ်ဖျား: ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီရုံစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအာကာသကနေအလုပ်လုပ်နေကပါဝင်ပတ်သက်လျှင်ပင်အခြားလူများန်းကျင်ဖြစ် သာ. ကောင်း၏
သင်တစ်ဦးအလုပ်အင်တာဗျူးလိုတူညီတဲ့ဦးစားပေးမယ့်ကလပ်, အားကစားရုံ, ဒါမှမဟုတ် Non-အမြတ်အစွန်းကို Join ကမှပုံမှန်တက်ရောက်မှုပေးပါ။
စွဲလမ်းစေဗီဒီယိုဂိမ်း, အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းသူတွေကိုကစားခြင်းကိုရပ်တန့်။ <- ဤသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တစ် subreddit ထိုက်တန်ပါတယ်။
တစ်ဦးပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားမှာ code တတ်ဖို့သင်ယူပါ။
ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အ Find နှင့်ဆုရဖို့လိုအပ်သမျှအရည်အချင်းများဆည်းပူး
အိုး, ပန်းပဲ, ဒါမှမဟုတ် parkour / ကျွမ်းဘားကဲ့သို့သောလူမှုရေးဝါသနာ, ရှာပါ။
ပုံမှန်ထွက်အလုပ်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်ကြင်ဖော်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ရယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကို“ သူတို့၏စိတ်” အတွက်ချစ်ကြလျှင်ပင်ထိုစိတ်သည် sexy body ကိုထုပ်ပိုးနေလျှင်သင်သူတို့ကိုသင် ပို၍ ပင်နှစ်သက်ချင်ပါသည်။ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရသလဲ။
အဆင့်3- သင်၏အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကိုရင်ဆိုင်ပါ
post-FAP အရှက်ကွဲခြင်းကိုမကြာခဏတခြားခံစားချက်တွေကိုမှချည်ထားသောဖြစ်ပါတယ် အရှက်ကွဲစေနှင့် လူမှုရေး ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ရှိသည်။ နှစ်ခုစာရင်းကိုရေးပါ။ သငျသညျအရှက်ကွဲခြင်းခံစားရစေတော်မူပြီကြောင်းကိုသင်၏အသက်တာ၌အရာရာတစ်ခုမှာ, နှင့်သင်၏ကြောက်လန့်သောလူမှုရေးအခွအေနေတဦး။
ကြှနျတေျာ့အတိတ် porn စွဲ, ငါမှ fapped အမှန်တကယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အမှုအရာအချို့
အခုတော့သင်သည်သင်၏အရှက်ကွဲခြင်းကိုစာရင်းနှင့်အတူ options နှစ်ခုရှိသည်:
၁။ မိမိကိုယ်ကို / သူတစ်ပါးကိုအပြစ်လွှတ်ခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်၎င်းအားလုံးမေ့ပျောက်ခြင်း မင်းရဲ့အတိတ်ဟာမင်းရဲ့အနာဂတ်လောက်အရေးမကြီးဘူး။
2 ။ (ဘေးကင်းလုံခြုံပါလျှင်) သင့်အရှကျကှဲအားလုံး fix နှင့်ငါ့နာမ Earl ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
သင်၏လူမှုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်စာရင်းတို့နှင့်လည်း options နှစ်ခု:
1 ။ သင်၏လူမှုစိုးရိမ်မှုတွေကိုကျော်လွှား။
2 ။ မိမိအလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေ facing ကိုကြောက်သောသူတစ်ဦးသူရဲဘောနည်းအဖြစ်နေထိုင်ကြသည်။
ငါနှစ်ဦးစလုံးစာရင်းများအတွက် option ကို 1 အကြံပြုပေမယ့်ရှေးခယျြမှုသငျသညျအထိဖြစ်ပါတယ်။ အဘို့ ကြည်လင်သန့်စေခြင်းငါသတ်မှတ် လူမှုရေး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာ bungee ခုန်ခြင်း (သို့) မိကျောင်း - ပြိုင်ပွဲကိုသွားဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေးကြောက်ရွံ့မှုများသည်အခြားလူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြောက်လန့်သောအရာများဖြစ်သည်။ အချို့မှာလူထုရှေ့စကားပြောခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်များနှင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သင်၌၎င်းတို့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ဝင်စားနေသူတစ် ဦး အားပြောပြရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အစုအဝေးတစ်ခုသို့သွားပြီးမည်သူ့ကိုမှမသိခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
အဆင့်4- ကြိုးစားမှု NoFap
NoFap စိန်ခေါ်မှုကိုယူပြီးသင်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေမည်ကိုကြည့်ပါ။ ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်လိမ့်မည်အလောင်းအစား။
ဒါကငါ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်၊ ဒါကတခြားသူတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားလုံးလုံးလတ်ဆတ်စွာရပ်တန့်သွားစေရန်ကူညီနိုင်လောက်အောင်လုံလောက်ပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ဘဝသည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောခံစားမှုမခံစားရမချင်းအကျင့်မှမလွတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ